O siri ike inweta ego na mgbakwunye mgbakwunye? - Mụta ịde blọgụ ọkachamara
Mgbakwunye ahia bu maka ahia ahia. Na-ewere ngwaahịa n'ihu ndị na-ege ntị, kọwaa atụmatụ- olee uru ngwaahịa ahụ baara ha? ọ bụrụ na ha masịrị ya, ha na-azuta ihe na azuma ahia, ị nweta ọrụ. Nke a bụ echiche dị mfe nke mgbakwunye mmekọ.
O siri ike mana usoro kachasị mfe iji nweta ego na mgbakwunye mmekọ na-atụle ụzọ ndị ọzọ nke ị nweta ego. Nwere ike irite nnukwu site na obere mgbalị. N'ezie, ị kwesịrị ịlele ndị na-ege ntị kwesịrị ekwesị, ndị na-achọ ngwaahịa ahụ kwesịrị ịdị mkpa.
Ndị na-ege ntị ziri ezi dị mkpa. Fọdụ ndị mmadụ na-enyochacha ndị na - ege ntị ma lekwasị anya ha ma mesịa mee ka ọnụego ntụgharị dịkwuo elu. Nzacha ndị mmadụ bụ echiche emepụtara dị ka foneelu.
Ihe ụfọdụ, ị ga-echebara maka ịme ihe dị mfe site na ike iji kpata ego. ka anyị tụlee ha.
Mgbakwunye Commission na-enye ụlọ ọrụ
Icheta ndị zụrụ ihe dị mkpa
Mee Ego site na Mgbakwunye Mgbakwunye na-aga nke Ọma ma Na-aga nke Ọma
Ihe mere o ji esi ike?
Mepụta ọwa mmiri
Tinyere ndị na-ege ntị ziri ezi, ị nweghị ike ịjụ mkpa nke ọrụ pasent. Enweghị mgbagha ọ bụla, Ahụla m ọtụtụ narị mmadụ bụ ndị atụ na-amụba karịa $2000 kwa ọnwa mfe na ndị mmekọ Amazon.
Otú ọ dị, ọrụ ndị ọzọ na-enye ụlọ ọrụ agafeghị ndị mmekọ Amazon. Amazon na-enye naanị 8 ka 10% kacha ọrụ ebe, ụlọ ọrụ dị ka Clickbank dị njikere ịkwụ ụgwọ 60% nke ọrụ nke ngwaahịa. Ya mere, Shouldkwesịrị ịbụ onye maara ihe mgbe ị na-eburu ụdị ngwaahịa kwesịrị ekwesị yana ọnụego ọrụ.
Ihe ọtụtụ ndị mbido ọhụrụ na-eme bụ- naanị mepụta weebụsaịtị nwere ike iwepụta ọdịnaya anaghị ekwenye, na weebụsaịtị ha ma bido ịkwalite. Ha aghọtaghị mkpa nke ndị zụrụ ikike. Nke a n'ezie na-eme ka ha sie ike ịkpata ego na ntanetị.
Nzube ziri ezi bụ akụkụ kachasị mkpa nke ịga nke ọma nke mmekọ mmekọ. Ahụla m ọtụtụ okwu mgbe ndị mmadụ na-ewetara ndị ahụ na-enweghị mmasị ngwaahịa ha.
Iji maa atụ –Mgbe mmadụ na-achọ oche ma ị na-akwado atụmatụ ekwentị mkpanaaka, nke a bụ kpam kpam igbu oge, ume, ịrụsi ọrụ ike ma na-emechu gị ihu ma na-eme ka ị ghara inweta ego sitere na mgbakwunye mgbakwunye.
Echetara m, mgbe m bidoro mgbakwunye mgbakwunye m mere blog mara mma. Anyị gbakọrọ aka rụọ ọrụ na imepụta ogo na ọdịnaya kwenye. Anyị gara maka nyocha zuru ezu nke obere isiokwu asọmpi sitere na Semrush, na site na Google autocomplete. Anyị fọrọ nke nta 40 + isiokwu maka ịga n'ihu 2 Ọnwa.
Anyị na-elekwasị anya na ihe ndị anyị chọrọ. Ọ pụtara mgbe mmadụ na ụdị “laptọọpụ kacha mma n'okpuru 1000 dollar”. Ha kwesịrị ịga na blog blog anyị kpọrọ aha ya “laptọọpụ kacha mma n'okpuru 1000 dollar”.
Ihe anyị na-eme bụ- anyị na-ezubere ndị na-ege ntị ziri ezi. Ọ pụtara na mmadụ na-achọ a “ezigbo laptọọpụ n'okpuru 1000 dollar”, ma anyị na-ejere ha ozi otu ihe ahụ. Ebe a, n'okwu a, ntụgharị ọnụego ka dị elu ụbọchị ndị a.
ọ bụrụ na mmadụ arịọ maka laptọọpụ metụtara ozi. Anyị anaghị ere ahịa ma ọ bụ gosi ihe ọzọ.
Ndị mmadụ na-enyemaka nke Facebook, Twitter, wdg. iji mee ka okporo ụzọ gaa na weebụsaịtị ha site na isi mmalite dị iche iche wee kwụsị na enweghị ahịa. Ihe kpatara ya bụ- Okporo ụzọ ị na-enweta site na mgbasa ozi mgbasa ozi, n'ofe ahụ, onye ma onye na acho laptọọpụ otu nde mmadụ.
Mana ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka ịchọọ site na Google, mmadụ kpọmkwem dee isiokwu ma nweta nsonaazụ ya kachasị mkpa. Ya mere, ọ bụ ya mere ọnụego mgbanwe ji dị elu mgbe ị na-ezube site na engines ọchụchọ karịa nke nke mgbasa ozi mmekọrịta.
Otú ọ dị, i nweghi ike iju uzo abuo. Otu bu ichota ndi na-ege nti na ndi otu mgbasa ozi. Have nwere nhọrọ isonyere ndị dị mkpa dị iche iche wee kesaa akụkọ kachasị mkpa na ha.
Nhọrọ nke abụọ bụ ịga maka mgbasa ozi akwụ ụgwọ. Facebook na - enye gị ohere ịhazi otu afọ ole yana ndị nwere mmasị na - ege ntị. Ọ ga-egosi gị blog post ad naanị ndị ọrụ nwere mmasị na laptọọpụ (dị ka ihe atụ). Mana nke a bụ otu mmachi ọzọ, anyị amaghị oge ịzụ ha. Ma ha zụtara ma ọ bụ chọọ ịzụta ma ọ bụ naanị nwee mmasị inweta ihe ọmụma nke teknụzụ na-agba ọsọ ugbu a.
Wayzọ ọzọ iji mee ka ego dị mfe site na mgbakwunye azụmaahịa site na imepụta ihe egwu egwu. Pịa foneelu na-asachapụ ndị na-achọ ngwaahịa a.
Ihe ha na-eme bụ na ha na-aga maka mgbasa ozi akwụ ụgwọ ma ọ bụ ahịa okporo ụzọ. Mgbe mmadu gara ileta webusaiti ha, ha na-egosipụta njirimara niile nke ngwaahịa ahụ na-akwalite ma jụọ maka nkọwa ndị dị mkpa tupu ịga n'ihu. N'oge usoro, ha weghaara email gi, mgbe ahụ gaa na nzọụkwụ nke abụọ wee gaa nke atọ. Mgbe ha mechara nke abụọ, ha kwagara na ugwo ugwo.
Ihe dị adị na-eme ebe a bụ, ha na-emezi ndị nwere mmasị. Ime ka o dokwuo anya, ọ bụrụ 100 ndị mmadụ na-aga na websaịtị naanị ka ha gụọ atụmatụ ngwaahịa a, n'ime otu narị, 30 ndị mmadụ ga-ejupụta nkọwa ndị bụ isi, tinye email ha.
Na 30, naanị 5 ndị mmadụ ga-aga na peeji nke ịkwụ ụgwọ. Ha nwere ike ọ gaghị abụ ịzụta ihe ozugbo. Mana ha egosila mmasị na onye nwe weebụsaịtị. Ha nwere mmasị na ngwaahịa ahụ mana ha adịghị njikere ịkwụ ụgwọ n'oge ahụ.
Ugbu a oge ọzọ, na-ahapu otu nari mmadu, ndị na-ege gị ntị ziri ezi bụ naanị mmadụ ise. Ọ bụrụ na ịnweta ọrụ dị mma site na ngwaahịa. Nwere ike ịmụba ọrụ ahụ site na 5. Ọ bụrụ na ọrụ gị karịrị $100 maka nnu, mgbe ahụ ị nwere ike ịchetụ n'echiche ọ dị mfe iji nweta ego site na azụmaahịa mgbakwunye.
Mgbakwunye Ahịa (na Etu esi amalite)
Nwere ike Mmụta Nweta Ego Online
Ọzọ PostEgo ole ka ị nwere ike iji Google AdSense nweta?